March 10, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 10th, 2017'
Maxkamadda sare ee Dalka Koonfurta Kuuriya oo Maanta Madaxweynihii Dalkaasi Xilka ka Xayuubisay (VIDEO)
March 10, 2017 – k ayaa go’aan t aan ka noqasholahayn ka gaartey madaxweykaha dalkaasi, kadib markii baarlamaanku uu soo jeediyey in xilka laga qaado haweeneyda dalkaasi Madaxeweynaha ka ah. Sababta xilka looga qaadey Mrs.Park Geun-Hye ayaa lagu sheegay in musuqmaasuq iyo ku-takrifal awoodeed ay ku kacday haweeneydaasi. Bishii Disembar ee sanadkii tegay ee 2016-da ayuu …
Mrs.Park Geun-Hye oo Xilka Laga Qaaday (VIDEO)
Sababta xilka looga qaadey Mrs.Park Geun-Hye ayaa lagu sheegay in musuqmaasuq iyo ku-takrifal awoodeed ay ku kacday haweeneydaasi. Park Geun-Hye ayaa laga xayuubiyey sharci awoodeedkii u diidi karay (immune) in maxkamad la horgeeyo, waxaana ay u badan tahay in lagu soo oogo dacwad la xiriirta laaluush ay ka qaadatey shirkadda electroni-ga- suubisa ee Samsung.
Dhalinyaro Horleh oo Laga Soo Tarxiilay Dalka Maraykanka oo Maanta Soo Gaaray Magaalada Muqdisho (Dhagayso)
March 10, 2017 – Waxaa maanta magaalda Muqdisho soo gaaray Dhalinyaro Soomaaliyeed oo tiradoodu gaareysay 64 qof kuwaasoo ay ku jirtay haweeney ayaa laga soo dejiyey goor dhow garoonka diyuuradaha Aadan cadde ee magaalada Muqdisho, ka dib markii laga soo tarxiilay dalka Maraykanka. Dhalinyaradan oo muddo badan ku jiray xabsiyada dalkaasi ayaa lagu eedeeyey iney …
Xafiiska hanti-dhowrka Guud ee Qaranka oo la Jabsaday & Dokumentiyo Muhiim ah oo laga Qaatay (Dhagayso)
March 10, 2017 – Hanti-dhowrka Guud ee Qaranka Dr. Nuur Faarax Jimcaale oo la hadlay Warbaahinta ayaa xaqiijiyay in la jabsaday xafiiskiisa oo ku dhex yaalla xarunta madaxtooyada ee (Villa Somalia). Saraakiil ka tirsan hay’adda Sirdoonka Soomaaliya ee (NISA) iyo Taliska AMISOM oo adeegsanaya Eeyaha u tababaran Raad-raaca iyo urinta ayaa la sheegaay inay saaka …
March 10, 2017 – Hay’adda sirdoonka dalka Mareykanka ayaa si faah-faahan uga hadashay dokumentiyadii ugu dambeeyey ee uu baahiyey website-ka sirta faafiya ee WikiLeaks, waxa ayna ka digtay in ay si aad ah uga walaacsan yihiin cawaaqibka ka dhalan kara faafinta sirtani. Afhayeenka u hadlay hay’adda CIA-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyadan oo …
Dayicii Lagu Eedeeyay Hay’adda FBI-da (VIDEO)
Afhayeenka u hadlay hay’adda CIA-da ayaa diiday inuu xaqiijiyo sax ahaanshaha dokumentiyadan oo gaaraya 8,771, hase yeeshee waxa uu ku dooday inaanu wax shaki ah ku jirin damaca WikiLeaks ee ah inay waxyeelo gaarsiiso awoodda bulshada sirdoonka ay uleedahay inay dadka Mareykanka ka horistaagto weerarada argagixisada VIDEO – 1 VIDEO – 2 Hay’adda CIA-da ayaa …